Iwu nzuzo - LucidPix
Adreesị weebụsaịtị anyị bụ: http://www.lucidpix.com.
Lucid wuru ngwa LucidPix ka ọ bụrụ ngwa Freemium. Lucid na enye aka oru a n’enweghi ego obu ihe eji eme ya.
A na-eji ibe a iji gwa ndị ọbịa banyere iwu anyị na nnakọta, ojiji, na ngosipụta nke Ozi Nkeonwe ma ọ bụrụ na onye ọ bụla kpebiri iji Ọrụ anyị.
Ọ bụrụ na ịhọrọ iji Ọrụ anyị, ị ga-ekwenye na nnakọta na ojiji nke ozi gbasara amụma a. A na-eji Ozi Nkeonwe anyị na-anakọta maka ịnye ma melite Ọrụ ahụ. Anyị agaghị eji ma ọ bụ kesara onye ọzọ ozi gị belụsọ dị ka akọwara na Iwu Nzuzo a.
Usoro eji na Nzuzo nzuzo a nwere otu ihe dị na Usoro anyị na ọnọdụ anyị, enwere ike ịnweta na LucidPix ọ gwụla ma akọwapụtara ya na Nzuzo Nzuzo a.
Mgbe ndị ọbịa hapụrụ okwu na saịtị ahụ, sonye na listi email anyị ma ọ bụ ndepụta nchere, anyị na-anakọta data egosiri n'ụdị ndị a nyefere, yana adreesị IP onye ọbịa na eriri onye ọrụ ihe nchọgharị iji nyere aka chọpụta spam.
Maka ahụmịhe kachasị mma, mgbe ị na-eji Ọrụ anyị, anyị nwere ike ịchọ ka ị nye anyị ụfọdụ ozi amata, nke gụnyere gụnyere aha njirimara, adresị, ọnọdụ, eserese, nkọwa, yana ozi ndị ọzọ nke onye ọrụ nyere. A ga-edowe ozi anyị na-arịọ anyị wee jikwa ya kọwara nke ọma na iwu nzuzo a.
Ngwa na websaịtị na-eji ọrụ ndị ọzọ nke nwere ike ịnakọta ozi ejiri iji mata gị yana / ma ọ bụ welite ọrụ anyị.
Njikọ amụma nzuzo nke ndị na-eweta ọrụ nke atọ na-eji ngwa ma ọ bụ weebụsaịtị wee:
Anyị chọrọ ịgwa gị na oge ọ bụla iji Ọrụ anyị, n'ihe banyere njehie na ngwa anyị na-anakọta data na ozi (site na ngwaahịa ndị ọzọ) na ekwentị gị nke a na-akpọ log Data. Data log a nwere ike ịgụnye ozi dị ka adreesị IP Protocol ngwaọrụ gị ("IP"), aha ngwaọrụ, ụdị sistemu arụmọrụ, nhazi nke ngwa ahụ mgbe ị na-eji Ọrụ anyị, oge na ụbọchị iji ọrụ ahụ, yana ọnụ ọgụgụ ndị ọzọ .
Kuki bụ faịlụ nwere obere data nke a na-ejikarị na njirimara ndị na-enweghị aha. A na-ezigara ndị a ihe nchọgharị gị na weebụsaịtị ndị ị gara, echekwara ha na ebe nchekwa ngwaọrụ gị.
Ọrụ a na ngwa nwekwara ike iji koodu ọzọ na ọba akwụkwọ na-eji “kuki” na-anakọta ozi ma melite ọrụ ha. Have nwere nhọrọ ịnabata ma ọ bụ jụ kuki ndị a ma mara mgbe a na-eziga kuki na ngwaọrụ gị. Ọ bụrụ n’ịhọrọ ịjụ kuki anyị, ị gaghị enwe ike iji ụfọdụ akụkụ nke Ọrụ a.
Anyị nwere ike were ụlọ ọrụ ndị ọzọ na ndị mmadụ n'otu n'otu n'ihi ihe ndị a:
Iji ikwado Ọrụ anyị;
Inye oru na nnọchite anyi;
Iji rụọ ọrụ metụtara ọrụ; ma obu
Iji nyere anyị aka nyocha gbasara otu esi eji Ọrụ anyị.
Anyị chọrọ ịgwa ndị ọrụ nke Ọrụ a na ndị ọzọ nwere ohere ịnweta Ozi Nkeonwe gị. Ihe mere bu ime oru aka enyere anyi n’aha anyi. Agbanyeghị, iwu ji ha ịhapụ ịkọ ma ọ bụ jiri ozi ahụ maka ebumnuche ọ bụla.
Anyị ji ntụkwasị obi ntụkwasị obi gị nwere n’inye anyị Ozi Nkeonwe gị, yabụ anyị na-agba mbọ iji ụzọ azụmahịa dị mma isi kpuchido ya. Mana cheta na ọ nweghị usoro nnyefe gafere na ntanetị, ma ọ bụ usoro nchekwa elektrọniks 100% echekwabara na ntụkwasị obi, anyị enweghịkwa ike ikwe nkwa na nchekwa ya.
Ọrụ a nwere ike ịnwe njikọ nke saịtị ndị ọzọ. Ọ bụrụ na pịa pịa njikọ ndị ọzọ, aga-eduga gị na saịtị ahụ. Mara na saịtị ndị dị n'èzí anaghị arụ ọrụ nke anyị. Ya mere, anyị na-adụ gị ọdụ ka ị nyochaa Iwu Nzuzo nke weebụsaịtị ndị a. Anyị enweghị ike ịchịkwa ma anyị enweghị ibu ọrụ maka ọdịnaya, amụma nzuzo, ma ọ bụ omume nke saịtị ma ọ bụ ọrụ ndị ọzọ ọ bụla.
Ọrụ ndị a anaghị edozi onye ọ bụla na-erubeghị afọ 13. Anyị anaghị akpachara anya na-anakọta ozi nkeonwe sitere n'aka ụmụaka na-erubeghị afọ 13 Ọ bụrụ na ị bụ nne ma ọ bụ nna ma ọ bụ onye nlekọta ma mara na nwa gị nyere anyị ozi gbasara anyị, biko kpọtụrụ anyị ka anyị nwee ike ịme ihe ndị dị mkpa.
Iji hazie omimi 3D na foto, anyị ga-ebugote foto gị na sava anyị maka nhazi ihe onyonyo AI nke dịpụrụ adịpụ. Anyị na-anakọta ma dekọ data ndị a:
Ngwa ịchọrọ ka edozie ya site na ngwa anyị.
Ọrụ nchọpụta pụrụ iche, nke na-enye anyị ohere ịchọpụta onye ọrụ gafee ọtụtụ ngwaọrụ.
Ndị na-ahụ maka mgbasa ozi pụrụ iche.
Adreesị IP nke ị si enweta ngwa. Anyị nwekwara ike ịchọpụta mpaghara ala gị site na adreesị IP gị.
Ozi ngwaọrụ, tinyere ụdị ngwaọrụ, ụdị sistemụ arụmọrụ, mpaghara oge yana asụsụ ị masịrị.
Ozi iji, dị ka oge na ụbọchị ị nwetara ngwa, njirimara iji, ihe masịrị gị na ogologo oge ị na-eji ngwa oge ọ bụla ị malitere.
Anyị nwere ike imelite Iwu Nzuzo anyị site n'oge ruo n'oge. Ya mere, a na-adụ gị ọdụ ka ị nyochaa peeji a kwa oge maka mgbanwe ọ bụla. Anyị ga-agwa gị maka mgbanwe ọ bụla site na biputere Iwu Nzuzo ọhụrụ na ibe a. Mgbanwe ndị a dị irè ozugbo ozugbo edere ha na ibe a.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ aro gbasara Iwu Nzuzo anyị, egbula oge ịkpọtụrụ anyị na info@LucidPix.com.